सुदुरपश्चिमको गौरव परिवारको शान,जय नेपाल आईजिपी साहेव ! – Himalitimes
तँ घुस खान सक्छस् ,नेताको गोडा मोल्न सक्छस् भने भर्ति हो नत्र तेरो मर्जी । २०४६ सालको परिवर्तन पछि प्रहरी अधिकृतमा भर्ति हुन फर्म लिई सुझाव लिंदा भर्खरै रिटायर्ड भएर बसेका मेरो ठुलोबुवा हेम बहादुर सिंहले मर्जि भयो । जिजुमुवाको धारणा पनि तलब सलब केही पुग्दैन भन्ने थियो । मैले प्रहरी अधिकृतको सपना देख्न छोडें । आर्मि र प्रहरी व्यारेकमा हुर्कि बढेको र प्रहरी स्कुलमा पढेको हुनाले सेना र प्रहरीमा जानुपर्छ भन्ने किरा दिमागमा पसिसकेको थियो ।आर्मी हुने सपना पनि मेरो जिजीमुवाको बिन्ती छ नजा तलब थोरै ,काम गाह्राे भन्ने आग्रहले त्यागी सकेको थिएँ । केही उपाय नलागे पछि बाहिर पढ्न जाने र पैसा बचाउने धुन चल्यो । तु ब्रुनाई राज दरवारमा काम गर्न हुईंकिएँ बुवाको एकदमै चल्ने ट्रेकिङ व्यबसायलाई लत्याएर ।
आन्दोलन ताका आफ्नै आखाले राजा त्रिभुवनबाट बकस प्राप्त चाक्सिबारी स्थित गणेश मान सिंहको घरमा भारतका नेताहरूले नेपाल बिरूद्व बोलिरहेको र दलाल नेताहरूले उफ्रि उफ्रि ताली बजाई समर्थन गरेको देखेको थिएँ । सोचेँ अवको राजनितीमा स्वाभिमान र ईमान्दार व्यक्तिहरूको ठाउँ नरहने ठुलोबुवाको बुझाई थियो ।
हेम बहादुर सिंह नेपाल जंगे र धर्म कुमारी सिंहको जेठो छोराको रूपमा जन्मेका थिए । उहिले बझाङ तथा बुङ्गल बासीले काठमाडौंलाई अर्कै देश झैं व्यवहार गर्थे र नेपाल भनेर मान्थे । जिजीबुवा काठमाडौंमा सबै भन्दा पहिले आई बसोबास गरेकाले नेपाल जंगे भनेर चिनिन्थे । हेम बहादुर सिंह राजकिय परिवेसमा जन्मे हुर्केकाले उनलाई परिवारमा राजा भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । प्रहरीमा जागिर खाएपछि धेरै मिहिनेत र लगनशीलले प्रहरी महानिरिक्षकको पद पाएका थिए । तर उहाँ महानिरिक्षक हुँदा राजसंस्थामा एक किसिमको बिवाद उव्जेको थियो ।
रत्न शमसेर रानी ऐश्वर्यको नाता पर्ने र हेम बहादुर सिंह एक कुशल तथा राजा वीरेन्द्रको मन पर्ने व्यक्तित्व । तर राजा वीरेन्द्रको च्वाईसमा हेम बहादुर सिंह प्रहरी प्रमुखमा आसिन भए । असहज मानी अफिस आउन छोडेको हुनाले राजा वीरेन्द्रको आग्रहमा हेम बहादुर सिंह रत्न शमसेरलाई आगामी महानिरिक्षक चेन अफ कमाण्ड अनुरूप उनी नै हुने भनी बुझाउन गएका थिए । तत्पश्चात रत्न शमसेरले प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउन आफ्नो प्रहरी प्रमुखलाई भरपुर सहयोग र साथ दिएका थिए ।
तत्काल समयमा हेम बहादुर सिंह साहेवलाई ठुलो चुनौती थियो । अधिराजकुमार धीरेन्द्रको कृयाकलापमा अंकुस लागेको थियो भने पुर्व आईजिपी ,सेनाको कर्णेल तथा अन्य धेरै गन्यमान्य व्यक्तित्वहरू सांगठनिक अपराध, सुन तस्करी र ठकुराठी गोली काण्डमा जेल चलान भएका थिए । यश समयमा प्रहरी प्रशासनलाई अपराधिकको चंगुलबाट मुक्त गर्ने , प्रहरी अधिकृतलाई चुस्त दुरूस्त राख्ने र मनोबल खस्किन नदिन भुमिकामा ठूलो चुनौती थियो । भर्खर प्रहरी बिध्यालय र हस्पिटल खोलेको अवस्थामा यसलाई चालू राख्न बजेटको चुनौती थियो । उनी प्रहरी बिध्यालयमा बारम्बार आईरहन्थे र प्रत्येक अधिकृतलाई आफ्नो बच्चा राख्नै पर्ने बाध्य बनाएका थिए । खैनीका पारखी उनलाई प्राय बिध्यार्थीले जुङ्गे आईजी भनेर चिन्थे ।
बेला बेलामा उनले आफ्नो आईजी क्वाटरबाट पठाएको फलफुल र मिठाई बिध्यार्थीलाई बाँडिन्थ्यो । उनकै सुझबुझले ट्राफिकबाट तत्कालीन डिआईजी असोक साहेबले दीपेन्द्र प्रहरी स्कुलमा बिरामी हुने बिध्यार्थीलाई पोषिलो दूध खान पाओस् भनी गाई पठाएका थिए । नेपाल प्रहरीलाई आधुनिकरण गर्ने हेतु त्यस बखत कम्प्युटर बिभाग खोलेका थिए भने आकर्षक रूपको रङ्ग भएको निलो रङ्गको युनिफर्म उनकै पालोमा लागू गरिएको थियो ।
उनकै कार्यकालमा प्रजातान्त्रको नाममा आन्दोलन भयो । धेरै मानवीय क्षति नहोस् भनी आफै फिल्डमा खट्टिरहेका हुन्थे । केहि अपराधिक मनोबृत्तीका राजनितीक कार्यकर्ताले गस्तीमा रहेको प्रहरी अधिकृत सहित केही प्रहरीलाई पिटीपिटी जिउँदै जलाउँदै थिए । सुरक्षाको ठूलो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई ख्याल राख्दै चीफ साहेब भीडमा नजाओस् भन्ने थियो जहाँ प्रहरीका सदस्य जीवनसँग लड्दै थिए । तर जीवनको पर्वाह नगरी गए जहाँ उनलाई त्यो भीडले त्राही त्राही बनाए , उसृङण्खल व्यक्तिहरू उनको जुङ्गामा जाई लागे । जानको प्रमुख कारण जसरी पनि ती प्रहरीलाई त्यो ह्रिङ्सक भिडबाट उम्काउन थियो । संगठन र प्रहरीका ती परिवारले त्यो हृृङ्सक भिडलाई गोली हान्न आदेश मागिरहेका थिए भने उनी कोहि हताहत नहोस् भन्ने मानसिकतामा थिए । प्रहरीलाई थप चिन्ता बढ्यो एउटा आफ्नो चीफको अर्को बाँधेर धुमाईरहेको त्यो प्रहरी हुलको ………………..
अन्तत ट्राफिक कार्यलय सिंहदरबारमा डिआईजी अशोक सिंहको सुझबुझमा बढो मुस्किलले प्रहरीको हुललाई छुटाउन सफल भयो तर बिडम्वना सबै प्रहरी राष्ट्रका लागि सहिद भईसकेका थिए र चीफसाप पनि त्यो हुलबाट छुट्न सफल भईसकेका थिए । यस दानवीय घटना घटाउने दोषीहरू पार्टिका नेताहरूको संरक्षण र निर्देशनमा कहिल्यै कानुनको कठघरामा उभ्याईएन । आफ्नो कार्यकालमा भएको प्रहरी परिवारले जीवन आहुती दिएको क्षणलाई आफ्नो ठुलो भुल र हृदयबिदारक ठान्दथे ।
देशमा प्रजातान्त्र आएपछि नया व्यबस्था अनुरूप धेरै फेर बदल भयो प्रहरी प्रमुख बदल्ने कुरा चल्यो । देश अस्तव्यस्त भयो । उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बोलाएर फेरि दुई बर्ष थप खान आग्रह गर्नु भयो । ,तर चीफ साहेवले चेन अफ कमाण्ड बिग्रने र आफु निजी स्वार्थ नहर्ने सुझाव दिए । त्यस समयका नेताहरूलाई रत्न शमसेर आईजी साहेब भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने अत्यन्त डर थियो । हेम साहेबको सुझावले गर्दा बाध्य भएर मन मार्दै रत्न शमसेरलाई आईजी बनाउन पर्यो । ,तर हेम साहेवको सुझावलाई गिरिजा प्रम भएपछि लत्याए र रत्न शमसेरलाई समय नपुग्दै फाल्नको लागि एउटा बलियो स्वार्थरूपी एक्का भेटे । तत् पश्चातको प्रहरी संगठन त पार्टीको खल्तिको खोटो सिक्कामा परिणत भएको हालको हविगतले देखाउँछ ।
केही व्यक्तिको निजी स्वार्थले प्रहरी संगठनको हालत नाजुक बनायो । जुनसुकै बेला पनि नेताहरूको स्वार्थ अनुरूप काम नगरे जागिर चेट भन्ने हालको प्रहरीको अवस्थाले दर्शाउँछ । आज दिवंगत ठुलो बुवाले भनेको प्रत्येक बाक्यहरूलाई सम्झन्छु र म प्रहरीमा गएको भए कि भक्कु घुस खानु पर्थ्यो कि नेताको खुट्टा मोलेर बसेको हुन्थें । ठिकै गरे जस्तो लाग्छ दलालको खुट्टा मोल्नु भन्दा र घुस खाएर बस्नु भन्दा प्रहरीमा नगएकै बेस भएछ ।
राजा वीरेन्द्र र कृष्ण प्रसादले एकदम रूचाईएको व्यक्ति हेम बहादुर सिंह काँग्रेसबाट चुनाव लड्ने प्रस्ताव आउँदा पनि जीवन भर कसैको कार्यकर्ता हुनू भन्दा देशको झण्डा बोक्न रूचाउँथे । महाराजगञ्जमा झोला हल्लाएर आफै तरकारी किन्न रूचाउने भलाद्मी राजा भनेर चिनिन्थे । उनी परिवारमा पनि भावुक तथा रिजर्भ व्यक्तिको रूपमा मानिन्थे । कहिले कसैको बिवादमा फसेनन् । आफ्नो पदलाई दुरुपयोग हुन कहिले दिएनन् । कुशल प्रहरी महानिरीक्षक हेम बहादुर सिंहको कार्यकालमा उनको आफ्नै भाईहरू पिडीत भए । आफ्नै बलबुत्तेमा डिआईजी भएका भाईहरू आफ्नो दाइ आईजी साहेव भए पश्चात पाईरहेको तक्मा र प्रमोसन पनि रोकिएको थियो । यहि कुराहरूलाई लिएर पारिवारिक भेटमा तितो प्रसंग उठ्ने गर्थ्यो तर यसलाई उनले कहिले महत्व दिंदैनथे तर पनि उनी सिंह परिवारको सान थिए ।
संस्कृतमा प्रखर उनले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट संस्कृतमा एम ए गरेका थिए । घरमा कोहि पण्डित आए भने शास्त्र , मन्त्र र सहित्य बारे सजग भएर कुरा गर्ने गर्थे । पाक शिक्षामा औधी ईच्छा राख्ने भएकाले मीठो मीठो परिकार पकाएर खुवाउन रूचाउँथे । उनले पाक शिक्षा बारे धेरै लेख तथा परिकार बनाउने तरिका लेखेका छन् । उनको संग्रह एकदिन पक्कै पब्लिस भएर निस्कन्छ भन्ने आशा छ । उनी बाचुन्जेल शान्ति रूपले बाँचे ।अध्यात्मिकमा धेरै बिश्वास गर्ने भएर होला शायद । जेठो छोरा य‍ोगी भएर जाने बेलामा परिवारमा टुलो तनाव भएको थियो । उनले सबै परिवारसँग सल्लाह गर्ने निधो गरे । उनी केही सरसल्लाह गर्न परे लक्ष्मण राजा यानी कि आफ्नो साहिलो भाईलाई बोलाउने गर्थे । साहिलो भाईलाई उनले कहिले तिमी भनेर सम्बोधन गरेको सुनिएन । हजुर र राजा भनेर सम्बोन गर्थे ,अति न‌ै संस्कारी व्यक्तित्व । उनको जेठो छोरा प्रभन्जन बहादुर सिंह यानी कि व्याग्र वेद नाथको बारे सरसल्लाह गर्न सबै जम्मा भयौं । आखिर छोराको जिदको अगाडि केही लागेन अन्तत् आईजी साहेबले आफ्नो फैसाला सुनाउँदै सबैलाई सम्यम बनाएर आगे भने खासमा जोगी त म वन्न पर्ने हो । तर अब उ गएर राष्ट्र र धर्म चिन्न प्रयास र जोगाउने उध्येश्य हो भने त धेरै उत्तम कुरा हो । ल तिमी जाउ र तिमलाई म पच्याउँछु भन्द‌ै अहिले जमाना बद्लियो छोरा पछि बुवा जोगी हुने भनी सबै परिवारलाई सम्झाए । यस आदेशले घरमा एकछिन सन्नाटा छायो र कोहि रून थाले ,कोहि एक अर्कालाई सम्झाउन थाले । जे होस् आईजि साहेव साँच्चिकै देश र धर्म प्रति सँधै चिन्तित देखिन्थे हाम्रो कर्मनिष्ठ अभियानमा सदैव चासो राख्दथे ।
अन्तत हेम बहादुर सिंहको भौतिक शरिरले छोडेर गएता पनि हामी उनको सरलता र ईमानदारीताको पथलाई सदैव पच्छाउने छौं । उनको भौतिक शरीर बागमतीको ब्रम्ह नालमा राख्दा उनको जेठो छोरा व्याग्र वेद नाथले आफ्नो बुवालाई जल दिंदै जे होस् मलाई जन्म दियौ बुवा ल धन्यवाद भनेको शब्द अत्यन्तै ह‌ृदय बिदारक लाग्छ । आफ्नो नाथ सम्प्रदाय अनुरूप उनक‍ो आफ्नै बुवाको अन्त्यष्टि नहेरि उनी त्यहाबाट ओझेल भए । जे होस् चोला त्यागेता पनि बुवाको माया त त्याग्न कठिन नै भयो होला । हाम्रो परिवारको सान ठूलो बुवा प्रति १३ औ दिनको पुण्य तिथीमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली , हजुरको आत्माको परमात्मासँग पुनर्मिलन होस् भन्दै हजुरलाई संधै सम्झनामा राख्न चाहन्छु । अन्तिम जय नेपाल ठुलोबुवा !!
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, कार्तिक १९, २०७६ 10:51:52 AM |
Prevनव नियुक्त सातै प्रदेश प्रमुखको शपथग्रहण आजै
Nextनवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुद्वारा सपथ ग्रहण